သို့ သဂျီး (အိတ်မပါပေးစာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » သို့ သဂျီး (အိတ်မပါပေးစာ)
Posted by nicolus agral on Nov 15, 2013 in Letter to The Editor, Members, Press Announcements | 33 comments
၁။ သဂျီးရဲ့ ဂေဇက်ကလည်း ဒီမိုကရေစီတွေ လူ့အခွင့်အရေးတွေသာအော်နေတာ
Member အချင်းချင်းတောင် အဆင့်အတန်းခွဲထားသေးတယ်
Post တခုကို ဟိုလူတွေတော့ဝင်ခွင့်ရှိတယ် ဒီလူတွေတော့ဝင်ခွင့်မရှိဘူးနဲ့
၂။ သဂှီး လိုဂိုပုံကြီးမကြိုက်ပါဘူး ပြင်လို့မရဘူးလား
ရွာထဲမှာ Idea ကောင်းတဲ့သူတွေ တပုံကြီး
ပြီးတော့မှ ဆန်ဒခံယူပွဲကို ပျော်ပျော်ကြီးလုပ်ကြတာပေါ့နော
၃။ မြန်မာပြည်ကနေ ရွာထဲဝင်ရတာခက်တယ်ဗျ Facebook ကြတော့အဲလောက်ကြီးမဆိုးဘူး
မြန်မြန်ဆန်ဆန် ၀င်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဗျာ
Commentပေးဖို့မပြောနဲ့ ၀င်လို့မရတဲ့နေ့တွေတောင် တပုံကြီး
၄။ Rule တွေထုတ်ထားရင် Regulation ရှိဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်
မဆဲရ ဆိုရင် ဆဲရင်ဘယ်လိုအပြစ်ပေးမယ်ဆိုတာပါ ထည့်သင့်ပါတယ်
Regulation မပါတော့ သဂျီးဟာကြီးက စက်ကူကျားကြီးဖြစ်နေတယ်
အနော်မလေး saline tinmg မခန့်နဲ့ဟဲဟဲ
ဘယ်လောက်ပဲ ဒီမိုကရေစီပြောပြော စည်းကမ်းဆိုတာရှိတယ်
မလိုက်နာရင် ဘယ်လိုအရေးယူမယ်ဆိုတာပါတယ် နောသဂျီးရယ်
မှတ်ချက်။ ။သဂျီးဧ။် နာမည်အသစ်ကို အတည်ပြုပေးပါရန် ၊ သို့မဟုတ်ပါက သဂျီးဟုဆက်လက်ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်သည်။
၁) ဒီမိုကရေစီမှာ.. ဥပဒေပြုသူ..။ ပြုထားသောဥပဒေကိုထိန်းသိမ်းသူ၊ လိုက်နာသူ၊ လေးစားသူ၊ စသဖြင့်အစုံရှိပါတယ်..။ ဒီမိုကရေစီဆိုပြီး အကုန်တတန်းထဲထားညှိနေလို့ လိုချင်လို့.. မဖြစ်ပေဘူးဗျ..။ တန်းညှိတာ.. မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်တွေအလုပ်ပါနော..။
၂) ဘယ်နှယ်ရှာစရာမရှိ.. လိုဂိုလာရှာနေတယ်..။ ပြဿနာ…ပြဿနာ..။ နေပါဦး..။ ကျုပ်ရဲ့ လက်ရှိပရိုအလုပ်ကဘာလို့ ထင်နေသလည်း..
၃) မြန်မြန်ဝင်လို့ရအောင်.. အင်တာနက်ဖိုးများများပေးလိုက်ပေါ့ကွယ်..။ ဘန်းဝ်သ်က.. ငွေနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်.. ဆာဗာရော..ကလိုင်းရင့်ရော..။မြို့အဆင့်မြှင့်တာ”လေအားဖြင့်”နဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော..။ “မန္တလေးမြို့”ကနေ..” မြန်မာနိုင်ငံ”အဆင့်တက်လာသလို..ဆာဗာပိုင်းကို ပုံမှန်ပေးနေကျထက် ၂ဆကျော် လစဉ်ပိုပေးထားပါတယ်..
၄) အမှန်က ရုးရော..။ ရဂူလေးရှင်းရောမထားချင်ဘူးဗျ..။ လူသိကြရင်ရှက်စရာ..။
စက္ကုကျားတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်.. မြန်မာဆန်ဆန်.. အုန်းလက်ကျားလေးလုပ်ပါနော..။
၅) ရှေးက မြို့ပိုင်တွေကို.. ဘုရားထူးရတယ်တဲ့..။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆို.. မောင်မင်း..လူကလေးနဲ့ပေါ့..။ ဒီခေတ်ကျ… တရားအကြောင်းပြပြီး.. လူကိုယူသည်..။ပြီးတော့.. ဘ၀ကိုယူသည်..။
၁။ post တွေအားလုံးကို ဖတ်ချင်တယ် ( ရရင်ရ မရရင်ချပဲ)
၂။ ဘာလို့မမထင်မိပါဘူးဗျာ (ပြောပြလေ အနော်ကပိန်းတယ် အကောင်မြင်စေခင်ရင် အကောင်လိုက်ပြ )
၃။ ကျွန်တော့ဖက် band width က 1MB တယောက်ထဲသုံးတယ် ( but 0.1MB တောင် တခါမှမရဘူးပါ သူတို့ကိုပြောတော့လည်း အမြဲတမ်းတော့ အပြည့်ရမယ်လို့မမျှော်လင့်နဲ့လေတဲ့ ဒါပေမဲ့ Band width အပြည့်ကတခါမှကိုမရဘူးပါ ညသန်းခေါင်မသုံးကြည့်ရသေးလို့လားတော့မသိဘူး)
၄။ အုန်းလက်ကျားဆို သူများကဂုတ်ခွစီးသွားမှာပေါ့
၅။ မြို့အုပ်မင်း ၊ မြို့ဝန်မင်း မြို့စားမင်း ဘာကြိုက်လဲဗျာ ( အနော်ကတော့ မြို့စား ဆိုတာလေးပိုကြိုက်တယ်)
ဒါ ဆို ဘာ လို့ ခေါ်ကြမတုန်းညင်….
တိမီး အရမ်း တိချင် လာဘီ…
သဂျီးလို့ ခေါ်ရတာ ပို ခံတွင်း တွေ့ ဒယ်ဗျ
ကျတော်ကတော့ မန်ဘာဝင်တွေဆီက လစဉ်ကြေး သဘောမျိုး
ဒီဝက်ဆိုဒ်ကို တကယ် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပါဝင်တဲ့သူဆို
မန်ဘာကိုအလွယ်တကူဝင်ခွင့်ပေးခြင်း ထက် နဲနဲ ပိုပြီးစိုက်ထုတ်ပါဝင်ခြင်းက မန်ဘာများကိုပိုမိုလေးနက်စေပါတယ်။
လက်ရှိ ပိုစ့်တွေကွန်မန်းတွေကို တသိန်းပြည့်ရင်ထုတ်ပေး
ကျတော်က ဒီပွိုင့်တွေကို စိတ်မဝင်စားပါ။လွယ်လွယ်ဝင်ရမယ်။
ပိုစ့်ကို ပုံနဲ့လွယ်လွယ်တင်ရမယ်။ ကွန်မန်းကောင်းကောင်းပေး
နိုင်မယ်။ဒါဆို အင်မတန် ကိုအဆင်ပြေမှာပါ။
ဆိုဒ်အကြောင်း သိပ်မသိပေမဲ့ သိသလောက် ကျတော်သဘောထားကို တင်ပြတာပါ။
ကျတော်ကတော့ သဂျီးအစား ချူပ်ကြီး လို့ပဲခေါ်ချင်ပါတယ်
ပွိုင့် ရရေး မရရေးကိုသိပ်စိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး။
အခုလို ပွိုင့် ခုနှစ်သောင်း မကျော်ခင်ကပေါ့
အင်တာနက်လိုင်းမြန်ရင် ၀င်ရလွယ်ပါတယ်။ သဂျီးနဲ့ဆိုင်ဘူးထင်တယ်။ အခုကျွန်မအင်တာနက် လိုင်း ပြောင်းလိုက်တာမယ် ရွာလည်လမ်း ကိုဖလမ်းဖလမ်းထပြေးလို့ရနေတယ်။ အရင်လိုင်းဟောင်း တုန်းက တနေ့နေလို့ပိုစ့်တပုဒ်မပွင့်ဘူး။ တနှစ်လောင်တောင်အဆက်ပြတ် သွားတယ်မှတ်တယ်။ ၀င်ရခက်တာနဲ့လှည့်ကို မကြည့်ဖြစ်တော့တာ။ နောင် အခုနောင်ပိုင်းလိုင်းအသစ်ပြောင်းလိုက်တော့ အရမ်းကိုလွယ်ကူစွာဝင်လို့ရတာနဲ့ မိုးလင်းတာနဲ့ရွာထဲရောက်နေတော့တာပဲဆိုတော့ကားးးးးးးးးးးးးးးးး သဂျီးနှင့်မဆိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ လိုဂိုကတော့ တည်ထောင်သူသဂျီး သဘောကျရင်ပြီးတာပဲမို့ ဒီအမွှေးကျွတ်ဒေါင်းလဲချစ် ရတော့မယ်ထင်ပါ့ အရင် မန်းဂေဇက်ကနေ မြန်းဂေဇက်လို့ ခေါ်ရတော့မယ် ထင်ဘာ့။ အဲလိုကျလဲမလှတော့ အရှည်ပဲ မြန်မာ့ဂေဇက်လို့ပဲ ရေသောက်ခေါ်ပါတော့မယ်။ ပုံတော့ကြည့်တော့ဘာဘူး။
ကျတော် ဒီဆိုဒ်ထဲ တရက်ကို လော့အင်ဝင်ဖို့
ပျမ်းမျှ တနာရီ အချိန်ပေးရပါတယ်။ဒီလိုပေးရလို့
MPT ကို ၁၂၀ ကျပ်ပေးရပါတယ်။
ဒီတော့ တလကို ၃၆၀၀ က ဘာမှမလုပ်ရပဲကုန်တာပါ။
တလဆိုရင် တရက်ကျော် အလဟသ အဝိုင်လည်တာနဲ့
တလ ၁၀၀၀ = MPT 3600 + တရက်ကျော်အဝိုင်းလည်း
သြော် သဂျီးလည်း မြို့ ပြောင်းပြီးမှ ခေါင်းကုတ်နေရပြီနဲ့တူတယ်။
ဒါဆိုလဲ သဂျီးက သဂျီးဘဲပေါ့ဗျာ။
သဂျီးလို့ မခေါ်နဲ့ဒေါ့ကွ.. သူဂ အဆင့်မြင့်သွားပီ.. ရှိတ်စော်ဘွားဂျီးလို့ ခေါ်ချင်ခေါ် အဲလိုမှမဟုတ် မူလာဂျီးလို့ခေါ်ရတယ်..
အရေးပိုင်မင်းကြီး ၊ ဆို ဘယ်လိုနေမလဲ ?
လိုဂိုကတော့ ကဒေါင်းကို နောက်ကရိုက်တဲ့ပုံ မဟုတ်ပီးတာပဲတဲ့… ဗိုလ်ကေဇီပေါတာ..
ဘာတွေ ခက်ခဲ ချေးများနေကြတုန်းးးး
လိုဂို ပြောင်းရင် မဝင်ချင်ကြတော့ဘူးလားးးး
နောက်လင်ရရ၊ နောက် ယောက်ကျား ရရ သိပ် အရေးမပါပါဘူးးး
အရေးကြီးတာ ဝင်ရလွယ်ပြီး ကိုယ်ရေးချင်တာရေးဖို့ပဲ မဟုတ်ပါလားးးးး
ပစ်ညှပ်တွေကို သိပ်သိပ် အရေးထားကြတာပဲ။
လူရင်းလို့ သဘောထားလို့ ရေးချင်ရာရေးတာ။
အိုက်စကရင်ခံကျိတာပေါ့အေ… ဂယ်ကတော့ အရင်လင်နဲ့ရတဲ့သားကော ခုယောက်ကျားနဲ့ရတဲ့သားပါ ချစ်ရတာပါပဲ
အဲဒီ အိုင်စကလင်တွေကိုက ခက်တာပဲ။
ဟိုလူကြောင့် ဒီလူကြောင့် ဟိုပုံကြောင့် ဒီ ပုံကြောင့်နဲ့ ဆိုင်သလားးးး
ပြောချင်းပြော ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ပဲ ပြောပေါ့။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အလုပ်များတယ်ပြော ပြောပေါ့။
ဟုတ်ဝူး..ဟုတ်ဝူး..အခုလူတွေက ဘာတွေရေးမှန်းမသိ..ဘာတွေမန့်ကြမှန်းမသိလို့..မလာချင်တော့တာ.. ခွိခွိ…
ဆိုင်အခင်းအကျင်း ပြင်ဆင်ပုံမကောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့ အပြင်အဆင်မကောင်းတဲ့ဆိုင် ဘယ်ဟာစားချင်လဲ မကြီး
(မြင်သာထင်သာတဲ့ဥပမာ – တွေ့မရှောင် မကြီးခိုင်)
အဲလာဆို မကြီးနဲ့ တစ်ရက်လောက် မုန့်လိုက်စားးးး
မကြီးကို တစ်ရက်လောက် မုန့်လိုက်ကျွေးရင် သိလိမ့်မယ်။
မျက်လုံးနဲ့ (ဆိုင် အပြင်အဆင်နဲ့) စားတဲ့သူမဟုတ်
နားနဲ့ (သူများ ကောင်းတယ် အပြောနဲ့) စားတဲ့သူမဟုတ်။
ကိုယ်တကယ် ကြိုက်ပြီး အရသာရှိတဲ့ ဆိုင် ဆို ချောင်းဘေး မြောင်းဘေး တဲပုတ်စုတ် နေရာမရွေး နယ်မရွေး အချိန်မရွေး စားပါတယ်ကွယ်။
အစားအသောက် ဆို တွေ့မရှောင်
လှတပတ ဒေါင်းရုပ် ဆမ်ပယ်တွေ ပေါမှပေါ ကို ….
ကျော် တောင် တကောင်ဖမ်းမိထားသေး…
ဟိုတုန်းက စဝ်ရန်နိုင် ဝတ္ထုတွေထဲကလို ဘချုပ် သာ ခေါ်လိုက်ပေါ့။ အဟိ။
သဂျီး ဆိုတော့ ခုခေတ် အခေါ်အရဆိုရင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပဲ။
ဖုန်းကဒ်တွေ တစ်လ ဘယ်နှစ်ကဒ် ဘုန်းလဲ သဂျီး။ ဟီဟိ။
အေးလေ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နေခဲ့တဲ့ရွာကိုယ့်ရွာဘဲပေါ့….ဟုတ်ဘူးလားသဂျီးရဲ့…
သဂျီး (ခ) မြို့ပိုင်မင်းဂျီး ပါးစပ်က
သူ့လက်က ဘာဒွေဘဲ ရေးရေး
သူသည် … (သို့မဟုတ်) .. သဂျီး ခေါ် မြို့ပိုင်မင်းဂျီးသည်
မြန်မာတစ်ယောက် ဖြစ်သည်ဟု သိပါရန် …..
တို့ကတော့ မိန်းမ မရ ရင် ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်…
ဒီလို သံသရာ လည်နေမှတော့
ဒါပေမင့် ခုနောက်ပိုင်းတော့ မြန်လာတာကို တွေ့ရပါကြောင်းးးးး
မဖြစ်နိုင်လောက်တာကိုဇွတ်ပြောရရင် ning site လေးတွေလိုလှတပတနဲ့ မန့်လို့ရရင်ကောင်းမယ်(သို့)လူတိုင်းကိုအက်ဒစ်လုပ်ခွင့်ပေးသင့်တယ်